खुरमा - विदेशी बेरी, मीठो र पौष्टिक। कारण उनको छाला को असामान्य उज्ज्वल छाया "सुन्तला सूर्य" भनिन्छ, उत्कृष्ट स्वाद धन्यवाद गर्न - "। खाद्य देवताहरूको" साथै, खुरमा कुनै पनि आहार ठूलो साथै यो धेरै लाभदायक भिटामिन र खनिज समावेश रूपमा छ। को बेरी आफ्नो आंकडा हानि गर्दैन रूपमा यो ठूलो परिमाणमा खाएको गर्न सकिन्छ। अब हामी एक खुरमा कति क्यालोरी पत्ता लगाउन प्रयास गर्नेछ र यो कसरी हानि वजन बढाउँछ।
फल को पोषण मूल्य यसको विविधता मा निर्भर गर्दछ। एक खुरमा कति क्यालोरी "प्रार्य गठन" भनिन्छ? Nutritionists 53 किलो कैलोरी को उत्पादन को कि 100 ग्राम भन्छन्। उत्पादन पकने रूपमा परिवर्तन जो जामुन प्रसिद्ध असामान्य astringent स्वाद र astringency यस प्रकारको। खुरमा फल सानो हो, 10 बीउ सम्म समावेश गर्दछ। को मज्जा र बोक्रा एक उज्ज्वल सुन्तला रंग छ। ताजा खुरमा सलाद र मिठाईहरू, स्थिर वा सुकेको मा मिठाई स्वादिष्ट - जाम मा, जोगाउनुहुन्छ, वाइन र syrups। त्यसै गरी, हामी खाना पकाउन र "कालो स्याउ" वा किनभने यसको आन्तरिक रंग को "चकलेट हलुआ" को रूपमा जानिन्छ जो खुरमा "korolok", मा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यस गोलाकार किसिम, कोर को आकार - एक सानो सिधा। कति क्यालोरी एक खुरमा "korolok"? प्रति 100 ग्राम कुल 53 किलो कैलोरी।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूप मा, बेरी वजन योगदान गर्न सक्नुहुन्छ कुनै तरिका, त्यसैले यसलाई खाएको गर्न सकिन्छ, वजन गुमाउन सपना जो पनि ती मान्छे। कारण मिठाई स्वाद, खुरमा चाँडै saturates: भोक लामो अवधिको लागि उत्पन्न गर्दैन।
खुरमा अन्य प्रजातिहरू
अन्य प्रजातिहरू उपस्थिति र पोषण मूल्य भिन्न। उदाहरणका लागि, खुरमा "शेरोन" एक मज्जा-जस्तो malic कोर छ। यो अचम्मको छैन। सबै पछि, जामुन यस प्रकारको - पार फल दुई परिणाम। भित्र, यो लगभग कुनै बीउ समावेश गर्दछ। रंग फल - उज्ज्वल सुन्तला, स्वाद - मिठाई, खुरमा पकने रूपमा बढ्छ। प्रति स्वाद उत्पादन 100 ग्राम 67 क्यालोरी: सबैभन्दा उच्च क्यालोरी "शेरोन" सबै प्रजातिहरू को। को "bovine हृदय" को लागि जस्तै, जामुन अर्को प्रजाति, यसको मुख्य फरक आकार मा छ - यो एउटा साधारण टमाटर जस्तो। फल पर्याप्त ठूलो र धेरै गुलियो, मुलायम कोर छन् र यसको स्थिरता समान छ जेली। क्यालोरी सामग्री 62 units - खुरमा यस किसिम को।
कि आहार बेरी मात्र ताजा फारममा मानिन्छ सम्झना। तपाईंलाई कति क्यालोरी थाहा छैन भने यो सुकेको खुरमा, त तपाईं निराश hasten - को पोषण मूल्य एकदम उच्च छ: 245 प्रति 100 ग्राम Kcal। त्यसैले, यो छैन आहार लागि उपयुक्त छ। एउटै एकदम ताप समान वृद्धि जो धेरै मीठो फल, लागू हुन्छ।
कसरी बेरी वजन बढावा
कति क्यालोरी एक खुरमा बुझेर हामी प्रत्येकले आहार मेनु फारम गर्न सक्छन्। बेरी मा यो सामान्यतया एक आरक्षित रूपमा शरीर मा सञ्चय छैन र बोसो तह परिवर्तन छैन समावेश चीनी यस्ता आहार लागि धेरै उपयुक्त छ। साथै, फल को एक ठूलो संख्या छ आहार फाइबर, लामो अवधिको लागि satiety एक भावना सिर्जना गर्ने, जो, को जठरांत्रिय पर्चा मा सुनिंनु। तदनुसार, तपाईं भोजन र खाने खान कम संभावना हुनेछ, र सेवा धेरै सानो हुनेछ। रोचक, तर धेरै लोकप्रिय आहार लागि आधार बस persimmons खाने छ। उदाहरणका लागि, वजन छिटो हानि लागि, nutritionists प्रोटिन आहार, जहाँ एक भोजन पूर्ण बेरी बदलिएको छ सिफारिस गर्छौं।
को खुरमा मा सम्पूर्ण आधारित आहार पनि छ। फल, एक हप्ताको लागि खाएको हुनुपर्छ हरेक दिन एक दुई गर्न किलोग्राम देखि। भोल्युम सानो अंश विभाजित गर्नुपर्छ। गैर-Carbonated खनिज र हर्बल चिया रूपमा समाधान। मात्र उनको फल प्रयोग गरेर एक हप्ताको उपवास दिन पटक व्यवस्था - अतिरिक्त वजन खुरमा को मद्दतले हटाउन अर्को तरिका हो।
हामीले 1 खुरमा पहिले नै बाहिर कति क्यालोरी समझ गर्नुभएको छ। अब, उत्पादन उपयोगी छ के बुझ्न गरौं। हामी मास्टर देखि सुरु: फल लुगदी को 100 ग्राम समावेश 0.5 ग्राम प्रोटिन र कार्बोहाइड्रेट को बारे मा 17 ग्राम। फल भिटामिन ए र सी, एंटीओक्सिडेंट, malic र साइट्रिक एसिड, sucrose र ग्लूकोज मा धनी छन्, र पहिल्याउन तत्व म्याग्नेसियम, क्याल्सियम, पोटासियम, आयोडिन, फलाम, तामा र मैंगनीज। खुरमा विभिन्न रोगहरु संग मद्दत गर्छ। यो गरिब दृष्टि साथ प्रयोग गर्न, थायरयड को विकार काम, रक्तअल्पता, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, क्षयरोग, हृदय र गुर्दे रोगहरूबाट, atherosclerosis र कुल थकान ग्रंथि सिफारिस गरिएको छ। ताजा निचोडा रस, न्यानो पानी संग पतला संग Gargling, यो दुखेको घोक्रा र सर्दी relieves।
खुरमा रक्तचाप normalizes। यो मान्छे अधिक हँसिलो र ऊर्जावान महसुस बनाउने, दक्षता बढ्छ शरीर मा, toxins, मुक्त कण समाप्त। जामुन - उत्कृष्ट astringent र जीवाणुरोधी एजेन्ट। तसर्थ, लोक चिकित्सा फल लुगदी मा घाउ निको लागि प्रयोग गरिन्छ।
यो बेरी रुचि, यो एक खुरमा कति मात्र क्यालोरी थाहा छ, तर हानि बारे मनमा राख्न यो एक निश्चित वर्ग मानिसहरूलाई हुन सक्छ कि आवश्यक छ। कब्जियत - पहिले, फल प्रयोग तपाईं को जठरांत्रिय पर्चा को समस्या देखि ग्रस्त गर्ने विशेष व्यक्तिहरूलाई सीमित गर्न चाहन्छु। पनि पूर्ण स्वस्थ मान्छे मा फल तपाईं चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस् राम्रो आहार मा जाने अघि त, आंत्र बाधा हुन सक्छ। दोश्रो, को खुरमा मधुमेह लागि contraindicated छ। र तेस्रो, यो सुत्केरी आमाहरू लागि कोटिगत निषेध, किनभने यसले बच्चा को शरीर मा रोग परिवर्तन को विकास हुन सक्छ छ। जामुन एक वर्ष को उमेर देखि बच्चाहरु दिइएको सकिन्छ - सानो परिमाणमा।
पहिलो स्थानमा फल खरीद गर्दा आफ्नो छाला ध्यान गर्नुपर्छ। खुरमा को परिपक्वता खैरो धर्काहरू संग सानो पारदर्शी र पातलो छाला भन्छन्। यसरी Peduncle खैरो र ड्राई हुनुपर्छ। स्थिर जामुन किन्न नडराऊ: कम तिनीहरूलाई मा पोषक, तर तिनीहरू पूर्ण आफ्नो रङ र स्वाद राख्ने।
अन्डा आहार: तपाईं उनको बारेमा के थाहा छ?
जौ porridge - कुनै पनि शङ्का बिना प्रयोग
दूध, यो उत्पादन को उपयोगी गुणहरू।
चिनियाँ बन्दागोभी र मकै संग स्वादिष्ट र स्वस्थ सलाद
रूपमा उपन्यास "युद्ध र शान्ति" मा साधारण मान्छे चित्रण गरिएको?
प्रभावकारी अभ्यास: भित्री जांघों कसरी निर्माण गर्न
Zemsky आदेश - राज्य प्रशासन को केन्द्रीय शरीर। Zemsky क्रम: विवरण र इतिहास
बुकमार्क दबाइ व्यापारीहरु के हुन्?
निर्देशन, संरचना र समीक्षा: को "Nutrilon 1 प्रिमियम" एक मिश्रण
कार्डहरू द्वारा विभाजन